IZBAN Tepekoy Izmir Izitishi zeBhasi kunye neMephu | RayHaber | raillynews
ikhayaETURKEYI-Turkish Aegean Coast35 IzmirIZBAN Tepekoy Izmir Izitishi zeBhasi kunye neMephu
10 / 12 / 2019 35 Izmir, ZoThutho, railway, I-Turkish Aegean Coast, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, ZOMHLATHI, ETURKEY
HZBAN Tepeköy İzmir Hours Expedition Hours: I-BZBAN yenye yeendlela ezinkulu zohambo lwedolophu eTurkey ngokudibana kwesikhululo seenqwelomoya, esebenza kumda wedolophu phakathi kweAliağa Selçuk. Inani lezikhululo zokuhamba ngokukhawuleza kwezithuthi, ezinamashumi amawaka eendwendwe mihla le, zonyukele kuma-32 ngokuvulwa kweHilal kunye nama-38 ngokuvulwa komgca weTorbalı. Emva kwexesha, kunye nemigca evuliweyo, i-41 nenombolo yezikhululo i-BZBAN, İzmir2 yinkqubo kaloliwe ethatha umthwalo omkhulu kwicala lezothutho lukawonkewonke. Umgca usebenza ngokubambisana ne-TCDD kunye noMasipala oMbhaxa we-Izmir 136 ikhilomitha elide.
Izitishi ze İZBAN
Iikhilomitha ze-136 Zonke zikhubaze ukufikelela kumgca we-İZBAN 41 isikhululo. Ukusuka emantla ukuya emazantsi ngokwahlukeneyo:
Isikhululo senqwelomoya iAdnan Menderes,
izitishi. Alaybey, Karşıyaka, Izikhululo zeNergiz kunye ne-Şirinyer ziphantsi komhlaba, ezinye izitishi zingaphezulu komhlaba.
Izitishi zokuTshintshela kwe-BZBAN
Ukusuka eHalkapınar kunye nezikhululo zeHilal ukuya İzmir esitimeleni; Iibhasi ziyahanjiswa ukusuka kwizikhululo zeAlancancak, iBicerova, Cumaovasi, Cigli, Egekent, Esbas, Halkapinar, Hatundere, Kemer, Mavisehir, Menmen, Salhane, Sarnic, Garage yeSithili, Sirinyer, Turan ne-Ulukent. Isikhululo senqwelomoya iAnnan Menderes sinokufikelelwa kwisikhululo segama elifanayo ukuya emazantsi omgca. I-Alaybey, Alsancak, Halkapınar kunye nezikhululo ze-Mavişehir zingadluliselwa kwimigca yetram.
Iiyure ezingama-pedZBAN Expedition 2019
Ixesha lokuphuma: 05: 20
Ukufika kwexesha kwesitishi sokugqibela: 01: 23
Ivula nini i-İZBAN?
I-İZBAN, esebenza kumgca wedolophu phakathi kweAliağa kunye neSelçuk, ivula e05.20 ngeempelaveki. Ngamanye amaxesha iiyure zinokwahluka ngexesha leholide.
Ivala nini i-BZBAN?
I-IZBAN, esebenza kumgca wedolophu phakathi kweAliaga neSelcuk, ivala e01.23 ngempelaveki. Ngamanye amaxesha iiyure zinokwahluka ngexesha leholide.
Isikhululo se-136 sikumgaqo we-İZBAN, osebenza kumgca we-40 kilomitha yomgca ophakathi kweAliağa kunye neSelçuk. Iziko laseMantla phakathi kweAliağa neMenajane kubhekiselwa kuwo njengophawu oluphakathi phakathi kweMenemene neCumaovası kunye neziko elisemazantsi phakathi kweCumaovası kunye neTepeköy kunye neSeleçuk.
Malunga ne-İzmir İZBAN
I-İZBAN yenye yeendlela ezinkulu zokuhamba zoluntu ezidolophini eTurkey ngokudibana kwesikhululo seenqwelomoya, esebenza kumda wedolophu phakathi kweAliağa kunye neSelçuk.
I-IZBAN, eyaqala uhambo lwayo lokusebenza ngaphambi kwe-30 ngo-Agasti 2010, yasekwa yi-TCDD kunye ne-50 intsebenziswano kaMasipala weDolophu ye-Izmir. Inkampani ibonwa ifanelwe yinqanaba le-İşbirliği Best Collaboration ”kudidi lwe-3 yi-International Association of Public Public (UITP) ngobuchule bayo bokufikelela kubakhweli abazii225 zamawaka ezigidi ngakwimveliso eyenziwe ngomgca ohambisa abagibeli be-2013 amawaka ngosuku.
Inani lezikhululo ze-İZBAN, eziqale ukusebenza ngesikhululo se-31, zaqala ukunyuka zaya kwi-32 ngokuvulwa kweHilal emva koko kwi38 ngokuvulwa komgca weTorbalı. Ngokwaziswa kwezikhululo zezempilo kunye nezaseSelçuk, inani lezikhululo lonyuke laya kwi40. I-Hilal yindawo yesibini yokungenelela kwe-İzmir Metro kunye ne-BZBAN emva kweHalkapınar kwaye inikezele ngokulula okukhulu kubagibeli abavela kwindlela eya eSouth ukuya kwi-Konak Metro ngokutshintshela kwi-İzmir Metro. Ngokuvulwa kwezikhululo ze-Develi, iTekeli, iBeet, i-Kuşçuburun, iTorbalı, iTepeköy, iSağlık kunye neSelçuk, izikhululo ezilandela i-Cumaovası, i-550 iikhilomitha zifunyenwe.
Umgca we-İZBAN, oya kudlulela eBergama emantla, uya kufika kwi-185 yeekhilomitha xa iprojekthi igqityiwe.
Imephu yenethiwekhi ye-İzmir Rail Systems -Imephu ye-ZBAN
Inkqubo ye-SubZBAN Suburban, Imephu ye-BZBAN kunye neZikhululo ze-İZBAN
LineZBAN Aliağa-Menderes indlela yomgaqo kaloliwe useTorbalı-Tepeköy.
I-IİBB Torbalı neTepeköy izitulo zeethenda zithenda zaqokelela
İZBAN Umgaqo kaloliwe weAliağa-Menderes uphakathi kweTepeköy neSelçuk…
I-IZBAN ivala ngaliphi ixesha?
İZBAN Ixesha lokuhamba
Izmir Rail Systems Networks Imephu